Diyaarado dagaal oo Duqeyn Culus ku garaacay Saldhigyo ay Al-Shabaab lahaayeen – STAR FM SOMALIA
Diyaarado dagaal oo Duqeyn Culus ku garaacay Saldhigyo ay Al-Shabaab lahaayeen
Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose , ayaa sheegaya in diyaarado dagaal aan la ogeyn cida iska leh shalay galinkii dambe duqeyn culus ku garaaceen saldhigo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku dhaw dhaw Beer Xaani oo katirsan Jubada Hoose.
Diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in gantaalo culus ku duqeeyeen saldhigyo dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku dhaw dhaw Beer Xaani .
Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in duqeynta lagu garaacay saldhigyada Al-Shabaab lahaayeen ay ka dhasheen qasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aysan sheegin qasaaraha rasmiga ah.
Warar soo baxaya ayaa sidoo kale sheegaya in duqeymaha diyaaradaha geesteen qaarkood ku dhaceen deegaano ay dad shacab ah degnaayeen, walina lama oga qasaaraha dadka rayidka ah duqeyntaasi kasoo gaaray.
Diyaaradaha Dagaalka dalka Kenya ayaa inta badan duqeymo aan bartilmaameedkooda sax ah aheyn waxa ay ka geestaan Deegaano iyo degmooyin katirsan gobolada Jubooyinka iyo Gedo, waxaana duqeymahasai marar badan ku dhintay dad badan oo shacab ah.
Yuusuf Xuseen Jimcaale Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta ka hadlay amaanka Gobolka Banaadir
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 03-08-2016